Wararka Maanta: Talaado, Nov 6 , 2018-Guddiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed oo kala qeyb-samay
Cabdiwahaab Sheekh Mad Cabdkariin oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashada ee is casilay ayaa sheegay in kaddib markii ay arkeen faragalin sida uu hadalka u dhiggay lagu hayo doorashada, islamarkaana xildhibaannadii Koonfur Galbeed leysugu geeyay Muqdisho goosteen in ay shaqada isaga tagaan.
‘’Waxaa u aragnay in dhibaato ay ka iman karto qaabka ay hadda doorashadu u socto, sidaa daraadeed ayaa nagu qasabtay in aan ka baxno annaga iyo intii badneyd guddiga shaqadii naloo idmaday’’ ayuu yiri Cabdiwahaab.
Dhinaca kale xildhibaan Mad Kariin Maxamed Iftiin oo ka tirsan guddiga doorashada ayaa ka soo horjeestay is casilaada ay sameeyeen xubnaha guddiga oo ay ku jiraan guddoomiyihii iyo ku-xigeenkiisa, waxaana uu sheegay in is casilaadaasi waxba dib u dhac ah ku keeni doonin sida uu hadalka u dhiggay waqtiggii doorashada.
‘’Shalay si nabad-galyo ah ayaa u bilaawnay qabashada Araajida doorashada, musharixiin ayaa lacago laga qaaday, kuwa kalana haddda ayeey ku balansan yihiin in Araajidooda la qabto, is casilaadan waxaan u aragnaa mid arrimo kale ka danbeeyaan, ‘’ ayuu yiri Mahad Kariin.
Khilaafkan cusub ayaa ka dhax abuuri kara doorashada madaxweynaha maamula Koonfur Galbeed jahwareer siyaasadeed iyo dib looga dhaco waqtiggii loo ballansanaa in doorashada lagu qabto oo ku beegan 17ka bisha.